Isengezo sesenzo se-dungeon-rping ngesakhi se-Huxra esikuvumela ukuthi ujabulele ukubuthwa kwemishini kanye nezimpi zekhrisimesi. Hlola imigodi eyenziwe ngokuzenzakalela bese ulwa nabaphathi abanamandla.
I-Labyrinth Legend iyisidudla esinezinto ezenziwa nge-hakusura. Hlola izimbotshana ezikhiqizwa ngokuzenzakalelayo futhi uqoqe imishini enamandla yokulwa nezitha ezinamandla ezingaziwa!
Bat Izimpi eziyingozi ngokumelene nezitha ezinamandla Izilo eziningi eziyingozi ziyaqwala. で は Ngaphezu kokuthola imishini, kuzoba nzima ukuzithwebula uma abadlali ngokwabo bengakhuli. ・ Engxenyeni ejulile yomgodi omkhulu wesikhulu
Umphathi omkhulu ulindelwe Kungenzeka ukuthi ungakwazi ukunqoba ngasikhathi sinye, kodwa uma unquma isenzo sokulwa kaningi, kufanele ukwazi ukuthola inkomba yokunqobaImikhumbi ekhiqizwa ngokuzenzakalelayo AmaDungeons akhiqizwa ngokuzenzakalelayo ku-adventure ngayinye
Awusoze wazi ukuthi yiziphi izingozi namagugu akulindelwe uma usungenile.Izinto nezinto zokuqinisa abadlaliEmgodini ungathola imishini nezinto ezahlukahlukene
Amakhono angajwayelekile nawo angaxhunywa. ・ Ukuqinisa izinto ezisezisekelweni Emizaneni eyizingqinamba, vula amakhono amasha futhi uqinise okhethekile wemishini
Ungakha izesekeli ezinemiphumela, njll. Umbuso okuyisigaba sendaba yombuso oqalekisiwe awunakuphuma ngenxa yesiqalekiso sendlovukazi Bamba ilebuli futhi uveze imfihlakalo yesiqalekiso esetshenziswe embusweni
Umhlaba kulo mdlalo owethulwe upende wamachashaza Wonke umhlaba emhlabeni udwetshwa ngopende wamachashaza amabi nashisayo